एउटा विदेशिएका युवाको दर्दानक कथा,! अरबपति बन्ने सपनाले बनायो घर गोठालो - Muldhar Post
एउटा विदेशिएका युवाको दर्दानक कथा,! अरबपति बन्ने सपनाले बनायो घर गोठालो
मानबहादुर श्रेष्ठ २०७४, १२ मंसिर मंगलवार 651 पटक हेरिएको
केही बर्ष बिदेशमा गएर दुख गर्ने अनि सुखमय जीवन बिताउने धेरैदिन, थुप्रै पटक सपना देखियो । घरपरिवारमा पनि सधैं आफूले देखेका सपनाहरु बाँड्न थालियो । आफ्नो सपना सुनेर परिवारमा पनि सबैलाई खुसीले छाउने गथ्र्यो । अरब जानलाई गाउँघरमा पनि सबैलाई सल्लाह सुझाब पनि मागियो । गाउँघरमा सबैको आर्शीबादले काठमाडौं आए ।
काठमाडौं आउँदा सुनेको र देखेको सपनामा निकै फरक भयो । हुन पनि स्वभाबिक हो । कल्पना गर्नु र वास्तबिक भोग्नुमा । काठमाडौं धेरै पटक आए, म्यानपावर कम्पनीलाई भेटे, त्यसैमा महिनौं बित्यो । म्यानपावर कम्पनीले भोली भोली भन्दैमा निकै महिना रोक्यो । अन्तिममा त म्यान पावर ब्यवसायी नै कता हरायो कता । बिदेश जान लाग्ने रकम ऋण निकालेर दलालीको पोल्टामा दिएछु । केहीबेरमै तनाब सहितको पश्चाताप सुरु भयो । सपनालाई बिपनामै वास्तबिक काम गर्ने अठोटले फेरि पुनः अर्को म्यान पावर कम्पनीमा साउदी अरेबियामा जानका लागि आबेदन गरियो । म्यान पावर कम्पनीले पनि धेरै लफडा गरेर अन्तिममा आशा देखायो, अन्तर्वार्ता गरायो ।
अन्तर्वार्तामा मलाई अयोग्य ठानियो । मलाई कमजोर देखाएर भोलीको त्रास देखाइयो । साउदीमा गएर धेरै दुख पाउने, त्यो भन्दा नजानै बेश भन्ने संकेत देखेपछि मन खिन्न भयो । एकछिन पछि जाँगर आयो । आफ्ना पीडा बेदनाहरु सुनाउन थाले । अघिल्लो पटक दलालीले दिएको पीडा सुनाए । त्यसपछि त्यो म्यान पावर ब्यवसायीको मप्रतिको भाब पलाए जसरी ‘हुन्छ जा तर धेरै गाह्रो काम भने नगर्नु, गर्मी हुन्छ, सोचेर काम गरेस’ भन्यो । फेरी मुहारमा प्रकाश छायो र बाहिर निस्के र बेला बखत बस्ने गरेको आफन्तको कोठामा गए ।
नभन्दै २२ दिनमा भिसा लागेको भनेर कुरा ग¥र्यो । अब आफूलाई पनि केही जाँगर चल्यो । अब फलाईटको पखाईमा थिए । भिसा त लाग्यो तर भिसा लागेर मात्रै नउडाउने रहेछ । १३ जनाको भिसा लागेको थियो तर २२ दिनसम्म ५ जना मात्र जम्मा भयौं । हामीलाई त्यो म्यानपावरले हामीलाई सबै पैसा कोठामा बोलाएर माग्यो । मनमनै त लागेथ्यो कैल्य यो पनि दलाल त होइन भनेर । तरपनि भिसा लागेको भएपछि पैसा नदिन मनले पनि मानेन । भिसा स्वरुप सबै पैसा त्यसलाई नै दियौं । पैसा भन्दा पनि साउदी अरब उड्नु ठूलो कुरा लागेको थियो । करिब एक महिना २२ दिन पछि मात्र हाम्रो फलाइट उड्ने भन्ने आयो । अब त्यो दिनको पर्खामा बस्यौँ । केही दिन पछि त्यो दिन पनि आयो । जुन दिन हामी एअरपोर्ट जादै थियौं त्यो दिन नै हाम्रा लागि संसार जितेको जस्तो अनुभब भएको जस्तो लाग्दै थियो । किनकी पहिलो पटक बिदेशिदै थियौं ।
केही समय पछि अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा पुग्यौं । पाँचै जनालाई म्यान पावरवालाले प्लेनमा चढायो । प्लेन भरी हामी पाँच जना मात्र थियौं । एक आपसमा चिनजान ग¥यौं । आ आफ्ना योजनाहरु बुझ्यौं । कसैका पैसा कमाएर सहरमा घर बनाउने त कसैका गाउँमै कृषि ब्यवसाय गर्ने त कसैका ब्यापार गर्ने यस्ता यस्तै योजना बनाएर सबै जना निस्केका रहेछन गाउँबाट । पीडा मेरै जस्ता सबैजनाका ।
काभ्रेका हरीबहादुर लामा, भोजपुरका कमल बहादुर दाहाल, ताप्लेजुङ्गका सीताराम लिम्बु, इलामका दल बहादुर तामाङ र इलामकै अर्को म । हामी सबैले सपना पनि एउटै देखेका रहेछौं मोटामोटी । कुराकानी हुँदै थाहा भयो । हामीलाई त्यो प्लेन नै हो भन्दै देखाएर म्यान पावरवाला एअरपोर्टबाट निस्किसकेको थियो । हामीहरुमा डर त्रास भन्ने पनि केही भएको थिएन । किनकी हामी एक समूह मै थियौं पाँच जना । अप्ठेरो पर्दा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि भैसकेका थिए चिनजानको बखत मै । हाम्रो फलाइट गल्फ एयर थियो । हामी प्लेनमा बसेको केही मिनेटपछि उड्यो । प्लेन उड्यो, हामी पनि सगरमाथाको शिखरमा झण्डा फर्फराउनेको जसरी नै कल्पनामा उड्दै थियौं । किनकी हाम्रो लागि नयाँ थियो प्लेनमा चढ्नु र यात्रा गर्नु । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल काठमाडौंबाट उडेको केही घण्टामै अबुधाबी हुँदै साउदी अरेबियाको रियाद भन्ने बिमानस्थलमा पु¥यायो । हामीले काम गर्ने भनेको कम्पनीबाट हामीलाई लिन दुईजना साथीहरु आएका थिए । हामी बिमानस्थलबाट बाहिरिदै थियौं । गेटमै पुगेका दुईजनाले हामीलाई सोध्यो, ‘हामीहरुको नाम बताउँदै तपाँईहरु हो भनेर ।’ हामीले जबाफ दियौं । ‘हामी नै हौं भनेर ।’ त्यसपछि झनै सजिलो भएको अनुभब भयो । साउदीमा पनि हाम्रै नेपाली रहेछन भनेर । एक जना पहाडका र अर्को एक जना मधेशका दाजुभाइ थिए हामीलाई लिन आएका । पहाडीया साथी हाम्रै नजिकै छिमेकी जिल्लाका दीपक ढुङेल थिए । उनले आफ्नो कोठामा लगेर पाहुनाको जसरी सेवा सत्कार गरे । बेलुका पनि हामी रमाइला गफगाफ गर्दै सुतियो ।
बिहान उज्यालो भयो अनि बिस्तारै हामी सबै जना कम्पनीको कार्यालय तिर गयौं । कार्यालयमा हामी पाँच जनाकै राहदानी लाग्यो । हामी कार्यालयकै छेउछाउमा बसिरहेका थियौं । दिउँसो दीपक जीले अफिसमा खानको लागि कुरा गरे हामीहरुका लागि । पैसा दियो, खाना खायौं । फेरि राती हामी जम्मा ७ जनालाई लिएर गाडी हुइकियो अँध्यारो राती । त्यसपछि थाहा हुन थाल्यो हामी दलालीबाट निकै ठगिएका रहेछौं भनेर । जुन कम्पनीका लागि काम गर्न भनी म्यान पावरले पठायो, त्यो कम्पनीमा हाम्रो नाम ठेगाना नै थिएन । एकले अर्कोलाई पशु किनबेचको जसरी हामी त्यो ठाउँबाट पनि बेचिएका रहेछौं । मध्यरातमा गाडीले त्यो ठाउँमा पु¥यायो । बिहान हेर्दा त आफ्नै नेपालको कुनै ग्रामीण भेग जस्तै । हामी कसरी र कुन माध्यमबाट आइपुग्यौ आफैंलाई पनि थाहा भएन । एउटा गाउँमा आइपुगेका रहेछौं । त्यसै ठाउँमा डिउटी सुरु भयो फलाम ओसार पसार गर्नेमा । बिजुलीको टावरका लागि साना बिद्युत आयोजना निर्माण जस्तै ।
त्यो बिजुली टावरमा एक महिना जति काम ग¥यौं त्यसपछि बालुवा र ढुंगा मात्रै भएको ठाउँमा काम खोज्दै गयौं । सबैलाई एकै ठाउँमा काम भेटिएन । म अरु साथीहरु भन्दा अलि टाढा काम गर्न थाले केरेला गु्रपमा ।
काम गर्दै गए, काम गर्दा खासै असहज त थिएन तर एक्कासी डेढ महिना (४५) दिन नबित्दै हातको औंला च्यापियो । बिदेशको बिरानो ठाउँ के भयो भन्ने मान्छे पाउनै गाह्रो । भर्खर भर्खर घुलमिल हुन लागेको ठाउँ त्यसैमा डेढ महिना मै काम गर्ने हातको औंला नै मेसिनले च्याप्दाको पीडा । पीडामा मलम लगाउने ब्यवस्था कम्पनीको थिएन । कम्पनीलाई हामी जस्ताको पीडा सुन्ने फुर्सद नै हुन्नथ्यो । औंला च्यापेपछि रगत थामी नसक्नु भयो ।
बिदेशको पीडा भोग्दै थिए । एकजना म जस्तै पीडा बोकेर अरब पुगेको भारतीय नागरिक पनि मसंगै काम गथ्र्यो । त्यसले मप्रति दया देखाएर मेरो पीडामा असह्य भएर गाडीको ‘गेयार ओएल’ लगाइदियो । त्यसले पनि निकै राहत दियो । झलझल याद आइरहन्थ्यो आफ्नो जन्मस्थान । आफ्ना सहयोगी आफन्तहरु । पीडामा पीडितको जसरी मलम लगाउने, बेसाहारालाई साहाराको अनुभूति दिने जस्ता थुप्रै चरितार्थ बोकेका चिनजानहरुको याद आउन थाल्यो । बिदेशमा त्यस्तो अवस्थाका पाउँनु भनेको दुई प्रतिशत भन्दा माथी मुस्किल नै हुदो रहेछ । हातको औंला काटेर छट्पटाउदा आफ्नो जस्तै पीडा परेको भारतीयलाई बिझाएछ र त्यसले रगत थाम्नुका साथै आफ्ना गाडीका लगेर हस्पिटलमा लग्यो ।
भारतीयसंग जान त गए तर मलाई हिन्दी बोल्न आउदैनथ्यो । बोलेको कुरा अलि अलि बुझ्थे तर आफूलाई प्रतिउत्तर दिन गाह्रो थियो । तैपनी बिदेशमा यस्तो भगवान भेट्नु मेरो लागि सौभाग्यको कुरा थियो । एक अनजानलाई साहारा दिने मान्छे मलाई । उसले भन्दै थियो, ‘यो बिदेशको ठाउँ, यहाँ आफन्त पनि नचिने झैं गर्छन ।’ मैले मन थाम्न सकिन आँसु झारिसकेछु । उसले आफ्नो घरपरिवारको पीडा पनि सुनाउँदै थियो, मेरो मन भक्कानिएर भाब बिव्हल हुँदै थियो । किनकी उसका पीडाहरु पनि मेरै जस्ता मिल्दाजुल्दा रहेछन । कुराकानी गर्दै हस्पिटलमा पुग्यौं । हस्पिटलमा मेरो औंलाको औषधी उपचार ग¥यो । घरमा खाने औषधीहरु पनि दियो र बिस्तारै घाउ ठिक हुन लाग्यो ।
बिदेशको ठाउँ आफूलाई अन्याय परेमा उजुरी दिने ठाउँ कतै भेटिदैन । उजुरी दिन खोजेपनि कसैले वास्ता नै गर्दैनन् । आफ्नोे देशको जस्तो भए त पीडित भएपछि प्रहरी प्रशासनले सुनुवाई गथ्र्यो तर साउदीमा त अरु बिदेशीहरुलाई पशु सरह नै ब्यवहार गरिने रहेछ । ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेजस्तो सिस्टम आफू माथि परेको थियो । साउदी जस्तो मुलकमा प्राय अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कम गर्थे किनकी त्यहाँको शासन तुरुन्तै फाँसी थियो । आफूहरु पनि धेरै सचेत भएर काम गर्ने गथ्र्यौ । बिदेशीलाई अनेक बाहानामा पनि षड्यन्त्र बनाएर फसाइन्थ्यो ।
त्यो कम्पनीमा का गरेको करिब चार महिनामा दुई पटक बिना कसुर प्रहरीको फन्दामा परे । कठोर भएर बोल्नलाई भाषा नै आउदैनथ्यो त बोल्न सक्ने हिम्मत नै । बोली हालेमा साथ दिने कोही हुँदैनथ्यो । प्रहरीको फन्दामा परेपनि भाग्यले साथ दिएको भन्नुपर्छ । कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरुले यो निर्दोश छ भन्दै छुटाइदिए । ती साथीहरुलाई धन्यबाद भन्ने शब्द नै ठूलो थियो । त्यति बेला गरेका उहाँहरुको काम जीवनकै अबिस्मरणीय बन्यो ।
कम्पनी एकदम ठूलो दलालीले सञ्चालन गरेको रहेछ । एउटा कम्पनीमा धेरै समय काम गर्न दिँदैन तुरुन्तै अर्को ठाउँमा सारिहाल्थ्यो कि त अर्कै कम्पनीलाई मजदुर भनेर बेचिदिन्थ्यो । अर्को कम्पनी जाँदा झनै कठिन काम गर्नुपथ्र्यो । तीन चार कम्पनी फेरबदल गराएर अन्तिमको कम्पनीमा करिब दुई बर्ष जति नै बसिएछ । सुरु सुरुमा त दिनभर काम गरेर बेलुका खानलाई पनि नपुग्ने थियो । त्यसपछि भने अलि साउदी आउँदाको ऋण तीर्न सकिन्छ की जस्तो लाग्यो । महिनाको पाँच सय दिन्थ्यो त्यो कम्पनीले ।
काम गर्दै जाँदा तीन बर्ष बितेको पत्तै भएन । किनकी दुखैदुखमा सुख बटुल्दै थिए । म्याद सकिएपछि त्यो मुलुकमा बस्नु आफैं असुरक्षित हुनु थियो । नेपाल आउने तयारी गरे । कम्पनीले भने बिदा दिएको थिएन । यो दलाल कम्पनीले बिदा नदिएपनि जान्छु भन्ने सोचेर भागेर नेपाल आए । तीन बर्षको कमाई जाँदा लागेको भिसा खर्चको ऋण तिर्नमै बराबर भयो । त्यसपछि बिदेश जाने सपना नै गुम्यो । सुख दुख गरेर नेपालमै काम गर्ने सोच गरियो । आफन्तहरुले पनि बेलाबेलामा कुरा काट्न थाले । सबै युवाहरु बिदेशमा काम गरेर ठूलो प्रगति गरिरहेका छन तँ मात्र घरमै भन्नेहरुको पनि कमी थिएन । वास्तबिक बिदेशको पीडा कस्तो हुन्छ त त्यो मैले राम्ररी बुझेको थिए । भोगेको थिए ।
यसरी नै आफन्तहरुको दबाब र सल्लाहमा साउदी मै अर्को कम्पनीमा काम गर्ने राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने चारैतिर हल्ला सुनिदै गयो । त्यसपछि दोश्रो पटक त कमाउनु पर्यो भन्ने सोचेर मैले पनि बिश्वासका साथ बिदेश जाने निधो गरेर काठमाडौं आए । काठमाडौं आउँदा एउटा म्यान पावर ब्यबसायीसंग कुरा गरे । उसले आफूले धेरै जना पठाएको बतायो । मलाई पनि लाग्यो धेरै जना पठाएको भए राम्रै रहेछ भनेर ।
त्योसंग सम्पर्कमा नै रहँदा केही समयमा नै मेरो भिसा पनि लाग्यो । अनि केही दिनमै फलाइट सुरु भयो र काठमाडौंबाट उडे । साउदी अरेबियाको कम्पनीमा काम गर्ने भनेर आएको मान्छे सिधै कतारमा पुगेछु । अर्को ठूलो महान दलालको फन्दामा परेछु । अब फेरि कतार मेरा लागि कता हो कता । कतार मेरा लागि नौलो कुरा थियो । त्यसपछि जे जस्तो भएपनि कि त बाँचिन्छ कि त मरिन्छ भनेर एउटा कम्पनीमा गएर काम गर्न थाले । कम्पनीमा काम गर्दा करिब ३० महिनासम्म कुनै ठूलो असहजता भएन । राम्ररी काम गरेरै बित्यो । त्यसपछि कम्पनी नै सार्ने भनेपछि अब के गर्ने घर जाने की यतै थप कागजात बनाएर यतै बस्ने भन्ने दोधारमा भए ।
त्यहाँको इस्पोन्सरले पनि अब अर्को ठाउ जानुपर्छ भन्यो । त्यसपछि तीन चार दिनमा सोचे र कम्पनीसँगै आफू पनि जाने निधो गरियो । पहिला अर्कै देश जाने भनेर राहदानी बुझाएको तर, फेरि जोर्डन जाने भन्यो । त्यतिबेला पनि सानो तनाब थिएन । यसरी जोर्डनतिर आए । अरबपती बन्ने सपना आज अरबीको घर गोठालो छु । यस्तै छ मेरो बिदेशिएको जिन्दगी ।
साभार :इप्रभाव डट कम बाट